Nikatso ny Aterineto Tao RDC Nandritra ny Fihetsiketseha-Panoherana an’i Kabila, 36 no Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2015 16:20 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, বাংলা, македонски, čeština , Français, Español, عربي, Deutsch, English
Tamin'ny 19 Janoary, nanaparitaka an-kery ireo mpanao fihetsiketsehana izay manohitra ny fanitsiana indray ny lalam-pifidianana ka mampijanona an'i Joseph Kabila eo amin'ny fitondrana, ny polisy kongoley ao Kinshasa. Mpanao fihetsiketsehana 35 sy polisy 1 no maty. Niharan'ny fifandonana toy izany koa ny tanànan'ny Goma izay maro no voasambotra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana an'arivony. Te-hanitatra ankolaka ny fehim-potoana itondrany i Kabila, izay efa tokony hifarana amin'ny herintaona, amin'ny alalan'ny fanomanana fanisam-bahoaka izay haharitra telo taona mba hahavitana izany tsara. Voasakan'ny Lalampanorenana hiditra amin'ny fehim-potoana fahatelo i Kabila, saingy mihitatra ho azy izany fitondrany mandrapahavitan'ny fanisam-bahoaka. Taoriana kelin'ny hetsika, nikatso vetivety avokoa na ny aterineto na fandefasan-kafatra ary nikatona tahaka izany ihany koa ny sekoly tao an-tanàna. Kilasimandry maromaro no may nandritra ny fifandonana.
Nilaza ny mpitantan-draharaha fa ilaina ny fanisam-bahoaka alohan'ny hamoahana ny lisitry ny mpifidy hanatontosana ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemantera amin'ny taona 2016. Nanohana ny fitakian'ny mpanohitra amin'ny hanemorana ny fandaharam-potoana hanaovana ny fifidianana ny Fiangonana Katolika matanjaka dia matanjaka ao an-toerana. Efa eo am-pandinihana izany fanovàna natolotra izany ny eo anivon'ny antenimieran-doholona ankehitriny.
Ireo fikorontanana ao an-toerana raha niezaka ny hampikatso ny arabe ireo mpanao fihetsiketsehana no hasehon'ity horonantsary avy amina olom-pirenena nalain'i Kininfos tamin'ny 19 Janoary ity :
Ketraka noho ireo fepetra tafahoatra noraisin'ny governemanta i Paul Nsapy, sekretera jeneralin'ny Federasiona iraisampirenena ho an'ny zon'olombelona hoan'i Afrika miorina ao Afrika.
Ho an'ny ankamaroan'ireo olona ireo dia maty izy ireo raha nandroso hanohitra. Tsy nihevitra ny governemanta hanao tahaka ny ataon'ny vondrona mpioko izahay.
Mamintina ireo zava-nitranga nandritra ny herinandro ity horonantsary eto ambany ity:
Nanampy i Ida Sawyer, mpikaroka momba ny zon'olombelona ao RDC, fa mifanohitra amin'ny zon'olombelona haneho hevitra ny famoretana tahaka izao:
Nitifitra vahoaka ny tafika Kongoley ka nahatonga fahafatesana maro. Tokony avela haneho ny heviny sy hanohitra am-pilaminana tsy misy ahiahy ho faty na hosamborina ny vahoaka.
Nilaza i Sue Valentino, mpandrindran'asa misahana an'i Afrika ao amin'ny CPJ fa fanitsakitsahana ny zo fototra mahaolona ny Kongoley ny nanapahana ny serasera aterineto sy ny SMS :
Amin'ny fanakatonana ny aterineto sy ny fandefasan-kafatra ary ny tranonkala, dia manosihosy ny zo fototry ny Kongoley hifandray sy hahazo ary hampiely vaovao ny manam-pahefana Kongoley.
Manazava ny antony maha-hafa ity fihetsiketsehana ity ao anatin'ny bolongana Congo Siasa i Jason Stearns:
Mitàna andraikitra lehibe kokoa noho ny tamin'ny taona 2011 amin'izao fotoana izao ireo mpianatra. Teny amin'ny oniversitén'i Kinshasa ny ivon-toeran'ny fanoherana, izay nokorontanin'ny mpiambina ny filoha sy ny polisy. Maherin'ny 30 000 ny mpianatra ao amin'ny oniversite, ary an'hetsiny ry zareo manerana ny firenena. Any Bukavu ihany koa dia efa lohalaharaa amin'ny fihetsiketsehana ireo mpianatra oniversite omaly. Taloha, dia voatonitony ihany matetika ny hafanam-po ara-politika any amin'ny fonenan'ny oniversite satria misy ireo fikambanan'ny mpianatra mifandray tendro amin'ny vato nasondrotry ny tany ara-politika. Hafa kosa izany tamin'ity indray mitoraka ity.
Nandray ny fahefana i Joseph Kabila tamin'ny taona 2001 taorian'ny namonoana ny Rainy Laurent Kabila. Araka ny lalàna Kongoley, dia miandraikitra ny fitandroana sy fiarovana ny filaminam-bahoaka mandritra ny fihetsiketsehana ny polisy nasionaly. Afaka miantso fanampiana matetika avy amin'ny tafika ara-dalàna kongoley ny lehiben'ny polisy nasionaly raha tsy maharaka ry zareo.